चार सांसदलाई माधव नेपालकाे आश्वासन : 'उपचुनामा जिताउने जिम्मा मेराे' को हुन् त्यी सांसद ? - Himali Patrika
चार सांसदलाई माधव नेपालकाे आश्वासन : ‘उपचुनामा जिताउने जिम्मा मेराे’ को हुन् त्यी सांसद ?
हिमाली पत्रिका २६ साउन २०७८, 9:55 pm
काठमाण्डाै । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यको पद गुमाएका आफ्नो पक्षका नेतालाई फेरि जिताएर ल्याउने आश्वासन गर्नुभएको छ ।
मङ्गलवार अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत आशिक झाले चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा लिइएको एमबीबिएस प्रवेश परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याएकाे सन्दर्भमा गरेको सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ नेता नेपालले कर्णालीका आफू पक्षीय सांसदले गलत कुराको विरुद्धमा उठ्ने आँट गरेको भन्दै यदि उपचुनाव भए उनीहरूलाई जिताएर ल्याउने आफ्नो जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो ।
उहाँले कर्णालीका नेताहरूको साथमा आफू रहेको भन्दै दृढताका साथ अगाडि बढ्न पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हाम्रो कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीज्यूले बडो हिम्मतका साथ, साहसका साथ गलत कुराका विरुद्धमा उठ्ने आँट गर्नुभयो ।
उहाँहरूको प्रदेश सभाको सदस्यता धरापमा छ । र मैले भनिसकेको छु, तपाईँहरुको सदस्यता धरापमा छ भने, यदि तपाईँहरूकाे सदस्यता खारेज भयो भने अनि उपचुनाव भयो भने तपाईँहरूलाई जिताएर ल्याउने जिम्मेवारी मेरो हुनेछ । त्यसो हुनाले तपाईँहरू दृढताका साथ अगाडि बढ्नुस् । हामी साथमा छौँ ।’
वरिष्ठ नेता नेपालले आफूहरू कसैको सामु शिर नहुराउने र कसैको टाङमुनि नछिर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । आफूहरू दृढताका साथ अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । नेता नेपालले दम्भ र अहङ्कारका साथ गलत ढङ्गले चल्नेहरूलाई चुनौती दिएर आफूहरू अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।